Somali Web Designers | Dhiso Website Ku cajabiya/ Web Design Soomaali ah.
Falsan Web studio waa xarunta ama hoyga horumarinta, alifaada iyo abuurista website-yada. Waxaa kuu diyaar ah khuburo Soomaaliyeed oo ku takhasusay culuumta programming-ka gaar ahaan dhismaha website-yada. Hadii aad doonayso inaad yeelato website ganacsi ah ama mid shakhsiyeed waxaan ku leenahay afkaaga hooyo ugu qeex baahidaada aqoonyahanada bahda Falsan. Falsan waxay kuu balan qaadaysaa inay kuu falkiso website ku qanciya oo loo isticmaalay qalabka ugu dambeeya ee lagu falkiyo websites-ka. Aqoon iyo shaqo hufan ayaa ah halhayska shaqaalaha Falsan ee walaal boga xiriirka fur oo nala soo xiriir si aynu faahfaahin intaa dheer kuu siino. Guji Dabarkan oo adiguba eeg qaar ka mid ah shaqada aan qabanay.
Xulka hore ee website-ka waa nooca ganacsiga ama Business-yada.
1: E Commerce Website ka kooban inta page ee kugu filan.
2: Online Payment Solution – Aqbalka lacagaha online-ka.
3: Dayactir sanad kasta iyo qurxin bilaash ah, sida midabka iyo qaabaka oo wax laga badalo.
4:Tababar sidii aad u maamulan lahayd hawl yari.
5: Talooyin wax ku ool ah oo ku beegan Domainka iyo Hostingka, YouTube, FaceBook.
6: Design wanaagsan iyo www.somabiz.com directory oo lagugu daro bilaash.
Xulka labaad ee website-ka waa nooca shakhsiga ama personal.
1: Website ka kooban 5 ilaa 7 page
2:Social media-ha oo lagaa caawiyo sida facebook, twitter iwm
3:Tababar sidii aad u maamulan lahayd webkaaga oo aad isugu fillaan lahayd.
4:Goor kasta oo laguu dayactiro (Sanadki laba goor oo bilaash ah) sida ku daris ama ka dhimis hadba baahidaada.
5:Domain name-ka iyo Hosting-ka oo lagaa caawiyo waayo waa labada talaabo ee ka horaysa inta aan la dhisin websiteka.
6:Design aad jeclaato, hawl ku cajabisa, qiima aan ku didin iyo farsamo ku raaligelisa.
The shortest distance between two points is the straight line
Waxaan kuu balan qaadaynaa inaan kuu dhisno website ku cajabiya, qiimaha ugu macquulsan iyo caawimaad joogta ah.
Akhbaaraha & Teknolojiga Cusub
Wixii Ku Cusub Sharikada Falsan iyo Dunida Teknolojiga
Sadex talaabo oo muhim ah ayaa ka horaysa intaadan yeelan website shaqaynaya waana talaabooyin daruuri ah ama shardi. 1) inaad diiwaan galiso magaca aad doonayso inuu ciwaan u noqdo sitekaaga, inta badan dadku waxay jecelyihiin in uu ku dhamaado .com waana sida wanaagsan hadii ayan ujeedadaadu ahayn urur ama xarun tacliin taa ooy suuragal tahay inaad ku dhamayso .org ama wax la mida. Shirkado badan ayaa diiwaan galiya magacyada waxaase ugu wanaagsan sharikada la yiraa godaddy.com. 2) Talaabada xigta taa waa inaad hesho halkii uu sitekaagu ku hoyan lahaa ama uu dagi lahaa taasoo loo yaqaan hosting. Waxaa ugu roon oo aan anigu in badan la macaamilay hostgator oon filayo inay hogaamiyaan dhinacaa. 3) Talaabada ugu dambaysa waa inaad hesho cidii kuu falkin lahayd websiteka aad doonayso sida aad u doonayso waana halka ay sharikadan Falsan Web Studio u buuxisay umadeena si kalsooni, aqoon iyo qiima jaban ba ay ku dheehantahay. Waxaa intaa kuu dheer inaga oo kuugu adeegayna afkaaga hooyo, kula garab taagan caawimaad joogta ah iyo waliba hawla dheeri ah sida inaan kaa kaafino talaabooyinka sare oo dhamaan hawlaha aan kuu fududayno. Hamoogaan Falsan hadii ay kugu soo dhacdo inaad yeelato website. Waxaa isku duway : Maamulka Falsan. Dhiso Website Ku Cajibiya Booqo : http://www.falsan.com nagala soo xiriir :...
Microsoft Office 365 oo Looga Dhigay Bilaash Dhamaan Macalimiinta iyo Ardada Aduunka oo Dhan. Ardada iyo macalimiinta ku nool Maraykanka horay ayayba u isticmaalayeen khidmadan ay fidisan sharikada Microsoft ay fidisay uguna magac dartay Ofiice 365, hayeeshee waxay sharikadu ku dhawaaqday in dhamaan iskoolada aduunka oo idil ay iyaguna bilaash ku isticmaali karaan wixii iminka ka dambeeya, halka dhamaan hayadaha kale iyo dadkuba ay bixiyaan lacag taasoo aad ugu sahlaysa waxbarashada ardayda aduunka gaar ahaan kuwa danyarta ah. Si hadaba aad u isticmaasho waxaa lagaa rabaa oo kaliya inaad buuxiso form-ka xubnaha isla markaana aad siiso Microsoft “school email address” emailka schoolkaaga aad ku leedahay taasoo micneheedu yahay in marka hore madrasadaadu ay buuxiso formkaa deetana Microsoft ay ansixiso madrasadaada. Waxaa khidmadan si joogta ah u isticmaala dhamaan ardada Hong Kong, ilaa 6 million oo ah ardada Australia, ilaa 7 million oo ah ardada Brazil, 5 million oo ah ardada Jarmalka, ilaa 1 million oo ah ardada dhigata Jaamacada Anadolu ee Turkiga iyo kuwa kale oo badan. Ardaydii nasiib uyeelata in lagu ansixiyo waxay helayaan “the latest versions of Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, and Publisher ” waxaana laguu ogolyahay inaad ku nuqusho(install) ilaa 5 computer ama Macs iyo ilaa 5 kuwa gacanta lagu qaato. Sidoo kale waxaa OneDrive lagaa siinayaa space storage aad hawlahaaga ku xifdiso. Ugu dambayn waxaan jeclahay in fursdan ay ka faa’iidaystaan dhamaan ardada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gudaha dalka. Waxaa isku duway : Faysal Cali Ciise Madaxa Barmajada Falsan Web Studio...
Inkasta oo qof walba aanu ubaahnayn storage uu ku xafito faylashiisa hadana dadka qaar ayaa laga yaabaa in akhbaartani ay ka farxiso gaar ahaan inta danaysa IT-ga. Dadka isticmaala Google ayaa dhawaan waxay ku farxeen akhbaar ay shaacisay sharikada Google oo ah in ay siyaasiday mugga Google Drive ilaa 2 gigabytes oo dheeri ah. Sharikada kale oo iyaguna danaynaya inay iyaguna siiyaan dadka khadamaad la mid ah kan Google ayaa kusoo biiray suuqa technolojiyada, waxaanse eegaynaa fawaa’ida iyo khatarta ay yeelan karto khadamaadka noocan ah. Adigoo awooda inaad faylashaada goor kasta iyo meel kasta heli kara oon ku xirnayn komputerkaaga khaaska ah. Adigoo ka haysta dhamaan faylashaada nuskhad “Back up Copy” si ayan ulumin hawshaada marna. Adigoo si sahlan oo waliba khaas ah ula wadaagi kara faylashaada dadka muhimka kuu ah, xitaa sawirada iyo videos-ka. Ugu dambayn waxaa suura gal ah inay ka timaado khatar maadaama ay sharikad kale ay kuu xifdiyayso faylashaada sida hadii ay suuragasho dhacdo “hacking attack” ama ay hayadaha dawladu codsato faylashaada, waxaa kale oo suuragal ah in aadan si quman aadan u xirin faylasha qaar taasoo keeni karta si sahlan loo helo xogtaada kuugu kaydsan cirka. Sharikadaha kale ee iyaguna khidmadan bilaashka ah ku wehliya Google Drive waxaa ka mid ah: Amazon Cloud oo bixisa mugg gaaraya ilaa 5 GB https://www.amazon.ca/clouddrive/ Icloud Drive oo iyaguna bixinaya illa 5 GB https://www.apple.com/ca/icloud/icloud-drive/ Microsoft OneDrive oo bixinaya ilaa 15 GB https://onedrive.live.com Adrive oo iyaguna bixinaya ilaa 50 GB http://www.adrive.com Qore Faysal Cali Ciise...